Faah faahin dheeraad ah oo ka soo baxeysa Qarax shalay ciidamada xooga dalka ee DANAB lagula eegtay dulleedka Muqdisho. – Weheliye.com
Faah faahin dheeraad ah oo ka soo baxeysa Qarax shalay ciidamada xooga dalka ee DANAB lagula eegtay dulleedka Muqdisho.
October 3, 2019 A.Hussein Wararka 0
Muqdisho(Weheliye Online).Wararka kasoo baxaya Qaraxa ayaa ku waramaya in ku dhawaad ilaa 6 Askiri oo ka tirsanaa Ciidamada xooga dalka iyo sargaal sarkaal lagu magacaabi jiray Maxamed Yariisoow ay ku geeriyoodeen qarax shalay lagule eegtay dulleedka magaalada Muqdisho.
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya SNA ayaa sheegay in gaari ay la socdeen Ciidamada Kumaandooska ee DANAB uu qarax miino oo ahaa nuuca dhulka lagu aaso lala eegtay.
Maxamed Yariisoow oo ka mid ahaa saraakiishii ku dhimatay qaraxan ayaa ka mid ahaa dhalinyarada marka la eego sida weyn ugu dhaxmuuqatay saraakiisha da’da yar ee ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka.
Waxaa ahaa Taliyaha Cutubka 3aad ee Ciidanka Kumaandooska, waxaa lagu tilmaamay nin geesi ahaa, ka qeyb qaatay howlgalo kala duwan, waxaana uu ka mid ahaa Ciidamadii gudaha u galay Marka ee ka saaray Al-Shabaab.
Weerarka Miino ee lagu dilay Sarkaalkan iyo askarta la socotay ayaa waxaa sheegtay Al-Shabaab oo muddooyinkan kordhisay qaraxyada miino ee ka dhaca wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Al-shabaab ayaa sheegtay qaraxyo dhowr ah maalmihii ugu danbeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Dagaal hub looga furtay Al-shabaab oo ka dhacay deegaan ka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan.
Maxkamadda ICJ oo u yeertay Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Total page view: 2,702